आज कहाँ-कहाँ पानी पर्छ ? हेर्नुहोस् मौसम पूर्वानुमान Canada Nepal
आज कहाँ-कहाँ पानी पर्छ ? हेर्नुहोस् मौसम पूर्वानुमान
काठमाडौं । बुधबार काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा पानी परिरहेको छ । देशभर सामान्य देखि पूर्ण बदलीसहित प्रदेश २, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा केही स्थानहरुमा हल्का पानी परिरहेको छ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल नेपालमा भारतको छत्तिसगढ र मध्यप्रदेश आसपासमा अवस्थित न्युन चापीय क्षेत्रको सामान्य प्रभाव रहेको छ। साथै मनसुन न्यून चापीय रेखा औसत भन्दा दक्षिण तर्फ रहेको देखिन्छ ।
आज दिउँसो देशभर सामान्य बदली रही बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही र अन्य प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा मेघगर्जनसहित पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ ।
आज राति पनि देशभर सामान्य बदली रही लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानहरुमा तथा अन्य प्रदेशका थोरै स्थानमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ ।
भाद्र ३०, २०७८ बुधवार ०७:०९:३५ बजे : प्रकाशित